8 Mey 2017
Inona ny Network Time Protocol (NTP)?Raha ny marina, fitarafana amin'ny tambajotra ampiasaina hampiovaovana ny famantaranandro eo amin'ny rafitra momba ny tambajotra amin'ny tambajotra napetraka. Efa hatramin'ny taona 1980 no nisy ary noforonin'i David Mills tao amin'ny Oniversiten'i Delaware; Io no iray amin'ireo protocoles faran'izay sarobidy mbola eo amin'ny Internet. NTP dia nanolotra fanavaozana hafa fanovozan-javatra hafa izay tsy nanana fahafahana vitsivitsy nanova fotoana teo amin'ny sehatry ny loharanom-potoana na loham-pifandraisan'ny fotoana ho an'ny mpandray tombony na amin'ny fampifandraisana ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitohanan'ny tambajotram-pifamoivoizana.
NTP dia niova ny fanovana maro hatramin'ny nanombohany ny 30 taona talohan'izay. Ny adaptation NTP 0 dia misy karazana RFC 958 tamin'ny Septambra 1985. Ny NTPv0 dia afaka mamita ny mari-pahaizana amin'ny fotoana ao anatin'ireo milisy isa maromaro. Ao amin'ny 1988, ny RFC 1059 dia manavaka ny NTPv1, izay manasongadina ny fanamafisana ny NTP ho an'ny mpanjifan'ny mpanjifa sy ny fomba ifampizarana. Ao amin'ny 1989, ny RFC 1119 dia manavaka ny NTPv2, izay misy ny zavatra toy ny protocole fitantanana sy drafitra fanamafisana, izay mbola ampiasaina ho ampahany amin'ny androany. RFC 1305, izay nivadika tao amin'ny 1992, dia manavaka ny NTPv3. Ny NTPv3 dia nahitana fandinihana sy fandinihana fanampiny, izay manampy ny mpividy hifidy eo amin'ny loharano samihafa. Ny fomba fifandraisana amin'ny fifandraisana dia nahafantatra koa ny fanampiana hanamora ny fampitana ny fotoana amin'ny fifandraisana marobe amin'ny tambajotra. Ao amin'ny 2010, ny RFC 5905 dia nozaraina tamin'ny antsipiriany momba ny NTPv4 na dia novolavolain'ny RFC 7822 aza izy tamin'ny Martsa 2016. Ny NTPv4 no fanitsiana ny NTP ankehitriny. Mitazona fepetra mitovitovy amin'ny NTPv3 ihany koa izy io ary ahitana ny fanamafisana ny IPv6 ho toy ny tambajotra fototra. Ny fanamarinana dia manatsara ihany koa ary manome fiarovana tsara kokoa ny fiarovana.
Ny NTP dia mampiasa karazana fandaharana maro samihafa. Ny lanjan'ny rafitra fandrosoana dia fantatra amin'ny anarana hoe stratum ary navoaka ny zana-pitenenana nanomboka tamin'ny zero (0). Rehefa tafiditra ao ianao ao amin'ny loharano, loharano ary mampifanaraka amin'ny loharano avo kokoa amin'ny stratum (mametraha ny valin'ny tarehimarika), dia ampio ny 1 amin'ny teboka stratum. Azontsika ampiasaina ny fiheverana stratum ho toy ny ambaran'ny fahatokisana ny loharanom-potoana. Zero no azo ianteherana indrindra, ary 15 no ambany indrindra azo atokisana ary miaraka amin'ny ambaratonga azo ampiasaina ihany koa. Ny stratum of 16 dia tsy aseho intsony ary milaza fa adala. Ny teboka 16 stratum dia tsy loharanom-potoana. Ny NTP dia mandefa fotoana ao amin'ny Coordinated Universal Time (hafa antsoina hoe Universal Time Coordinated or UTC). Ny fiovana amin'ny fotoana misy ny mpifanolo-bodirindrina dia tokony ho azo atao amin'ny server server na eo amin'ny gadget mpanjifa.
Ny fandefasana serivisy ny NTP ho an'ny firoboroboana dia loharanom-potoana avy amin'ny loharano azo itokisana, ohatra, loharanom-panaovana fitantanana. Ao Etazonia, ny Ivotoerana Nasionaly momba ny Fahamarinana sy ny Teknolojia dia maneritery amin'ny fotoana izay ahafahantsika manitsy azy. Ao amin'ny tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi, dia afaka mahita olon'ireo servisy, ny toerana sy ny toerana misy azy IP mba hanondroana ny server server. Rehefa nakaranao ny fotoana ho an'ny mpizara amin'ny fotoana misy ny manodidina ary hitombo ny stratum, dia azonao ampiasaina izany ho toy ny loharanom-potoana ao anaty tamba-jotra. Ny switch sy ny switch (Cisco sy ny hafa) dia afaka manamboatra fotoana avy amin'ny serasera eo akaiky anao, ary aorian'izany dia afaka mivezivezy izy ireo mba ho lasa loharanom-potoana avy amin'ireo gadgets pastin'izy ireo. Ny ankamaroan'ny rafi-pihariana miasa dia hanampy ny NTP, anisan'izany ny Windows. Ny endri-panandramana Windows rehetra hatramin'ny Windows 2000 dia manana Windows Time Service (W32Time) mba hampifanarahana ny fotoana ampiasaina ny NTP.
Amin'ny tambajotra amin'izao fotoana izao, ny fotoana dia azo ahitsy anaty milisetra na milliseconds maro, fa nahoana? Izany dia miankina! Miantehitra amin'ny fampiasana sy ny fepetra takiana amin'ny fotoana. Mety ho ny fananana "famakiana" azo tsapain-tanana dia mety ampy hahafantarana rehefa navoaka ny mailaka ary nahazoana fanampiny. Ny mari-pamantarana amin'ny vanim-potoana fototra izay tena marina ao anatin'ny 10s amin'ny milliseconds dia ampy. Ny fampiharana dia mety ho fotoana fohy fanampiny. Amin'ny fijerena ny fanadihadiana, manana fehezan-teny an-tsokosoko mandritra ny milliseconds dia afaka manampy amin'ny famahana ny olana ao anaty tambajotra. Diniho ny fampiharana mifototra amin'ny asany. Ny fepetra mihoatra noho ny famantaram-potoana miavaka amin'ny famoahana kaonty na fifanakalozam-bola hafa dia tsy maintsy ilaina. Iray amin'ireo fampiharana fototra ny fampiasana ny NTP ho an'ny fahefan'ny mpamonjy voina, ary amin'ny maha-mpanjifa tsy tapaka ahy, dia faly aho fa ny vokatra sy ny fitaovana izay manara-maso ny fiaramanidina amin'ny sidina dia manana fahatakarana ao anatin'ny milliseconds. Izany dia mamela ireo izay manara-maso ny sidina mba hanana eritreritra goavana kokoa momba ny faritra misy ny fiaramanidina sy ny akaiky amin'ny hafa.
Ny NTP dia protocole izay efa mihoatra ny 30 taona ary mbola mameno izay ilaina. Nanjary mahazatra ny fanamafisam-peo, ary miankina tanteraka amin'ny fotoana. Miaraka amin'ny NTP androany, afaka mahazo loharanom-pahamendrehana betsaka kokoa isika ary mahazo marika amin'ny milyscond. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy zavatra azonao atao, dia jereo ny Protision Time Precision (PTP) ... na izany aza dia ho an'ny lahatsoratra hafa.